Taariikhyahanadu waxay noo sheegeen in Masar ay ahayd ilbaxnimo Negro-Afrika - Afrikhepri Fondation
Taariikhyahanadu waxay noo sheegaan in Masar ay ahayd ilbaxnimo Negro-Afrika ah
Akhrinta: 3 daqiiqo
Lisagu afrikaanka madow (Professors Cheikh Anta Diop iyo Obenga) wuxuu guul weyn ka gaadhay shirkii Qaahira ee 1974. Haddana Masaaridii Reer Yurub waxay sii wadaan inay taariikhda ka been abuuraan. Lisagu Griigga iyo Laatiinka, goobjoogayaashii Masriyiintii hore, waxay si joogto ah u xaqiijinayaan in Masaarida ay ka tirsan yihiin "jinsiyadda" madow. Markhaatiyada badan ee Giriigga iyo Laatiinka ah, aan soo qaadanno kuwa Herodotus, Diodorus, Aristotle iyo Heliodorus:
Herodotus, oo lagu naanayso aabaha taariikhda, taariikhyahan Griig ah (480-425 BC), wuxuu aaday Masar. Wuxuu noo sheegayaa in Masaaridii hore ay lahaayeen maqaar madow (melakroes) iyo timo firiiric leh (oulotrikhes) (Buugga II, 104).
Diodorus of Sicily, taariikhyahan Griig taariikhyahan ah oo Kaysar Augustus, (63 BC - 14 AD) wuxuu noo sheegayaa inay tahay Itoobiya oo gumaysan lahayd Masar (dareenka Athenia ee ereyga: kororka tirada dadka waxay keentay dhaqdhaqaaq woqooyi). (Maktabadda Taariikhda, Buugga III, 3,1).
Aristotle, aqoonyahan, filasoof, macalinka Alexander the Great, (389-322 BC), wuxuu ku kala saaraa Masaaridii hore iyo Itoobiyaan dadyowga leh maqaarka "xad dhaafka madow" (agan melanes) (Physiognomy, 6)
Heliodorus-ka Giriigga ah wuxuu wax ka qorayaa Chariclée, oo ah gabadh yar oo cadaan ah, oo ku sugan Masriyiinta hortooda: “Mar labaad, indhaha ayay kor u taagtay, waxay aragtay midabkooda madow (Itoobiyaanku, mugga 1)
Dhammaan qorista hieroglyphic, falka "kem" oo laga soo qaatay ereyga madow macnihiisu waa "fulin, kor u kac, fulin, bixinta lacag dhammaystirid, u adeegid laakiin sidoo kale" madow ". Ereyga kem sidoo kale macnihiisu waa: "dhammaystiran, dhammaystiran, waajibaad, waajibaad".
Osiris, ilaaha caanka ah ee Masar, waa marin madow. Qoraallada Ahraamyada iyo Buuga Dhimashada, waxaa loogu magac daray "Madow Weyn". Wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa koonfurta Masar (taas oo ah kiiska Fircoonnadii ugu horreeyay iyo mideeyayaashii Masar, Fircoon Narmer). Qoraallo badan oo Masaari ah ilaahadda Isis iyo Hathor iyo ilaahyada Thot, Apis, Min, Horus waxay u qalmaan sida madow, cinwaanka "madowka weyn" waxaa loo adeegsadaa ilaahyada qoraallada aaska dhowr boqor oo Masar ah (PepiI, PepiII, Merenrê) halka ereyga "casaan" loo qoondeeyey ilaahnimada kaliya ee sharka ah ee Masar, taas oo ah in la yiraahdo Seth, mabda'a sharka iyo nooca sharka ah ee khuraafaadka Masaarida. Maqaarka Seth waa casaan indhihiisuna aad bay u cad yihiin. Isagu waa ilaahda 'Hyksos', dadka maqaarka wanaagsan ee la midooba ilaaha Semitic-ga ee Bacal. Seth asal ahaan waxaa metelay dameer dabadhiisu kacsan tahay, wuxuu la mid yahay abeesada Apophis, mabda'a mugdiga ayaa had iyo goor hanjabaada iftiinka.
Falka "desker" macnihiisu waa "casaan, casaan noqo" laakiin sidoo kale "cabsi gelin", "kem" (madow, madow) sidaas darteed waa wax kasta oo u socda jihada runta-caddaaladda, isu dheellitirka cosmicka (waa yacni Macat luqadda Masaarida).
Ereyga "kem" (madow) sidoo kale waxaa loo isticmaalaa higgaadinta tilmaamaysa isha iyo timaha Masaarida. Sida aabaha aafada casriga ah ee Masar JF Champollion uu yiri: "madow, oo laga soo qaatay midabka timaha tartanka Masaarida".
Negro Nations iyo Dhaqanka: Laga soo bilaabo Masriyiintii hore ee Negro ilaa Dhibaatooyinka Dhaqanka ee Afrika ...
4 cusub oo ka yimid € 15,15
4 waxaa laga isticmaalay € 14,90
Iibso € 28,05
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay May 17, 2021 10:01 pm
Booqashada: Kulan ka baxsan dhulalka shisheeyaha - Dukumiinti (2015)
Absinthe, lelvetan, soursop, hemp: dhirtan dila kansarka
Farriimaha qarsoon ee Biyaha - Masaru Emoto (PDF)
Maktabadda guud ee taariikhda Afrika (PDF)
Saamaynta Wadajirka ah: Dooro inaad Ku Badiso Guushaada - Darren Hardy (Audio)
La wadaag maqaalkaaga